'निगमको संरचनागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ'
नेपाल आयल निगममा अनियमिता बढ्दो छ । निगममा हुने अनियमितताको विषयमा बेला बेलामा विबाद समेत हुनेगरेको छ । निगमलाई प्रभावकारी बनाउन स‌ंरचनामा पनि सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको टिका टिप्पणी भइरहेका छन् । निगमनलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता काम भैरहेका छन् ? आगामी योजना के छन् ? लगाएतका विषयमा रहेर नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसँग जनता पाटीले गरेको कुराकानी:
– निगम सुधारका लागि के कस्ता काम गदै हुनुहुन्छ ?
निगम सुधारको लागि तीन वटा विषयवस्तु रहेका छन । एउटा विषय वस्तु भनेको निगमको स्रोत र पुर्वाधारमा गर्न के गर्न सकिन्छ । जुन मेरो र बोर्डको नियन्त्रणमा रहेको छ । अर्काे भनेको मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ । निश्चित विषयहरु मन्त्रालयसँग जोडिएका हुन्छन । तेस्रो विषय भनेको सरकारसँग सम्बन्धित रहेको छ । मैलै तत्काल गर्ने भनेको जुन चिज निगमसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छ । ती काम म आएको पहिलो दिन देखि नै अगाडि बढाइसकेको छु । मन्त्रालयले गर्ने काम अलि ढिला हुन सक्छ । यो सँगै सरकारमा जाने चिजहरुमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौ । निगमको आन्तरिक सुधारका लागि मैलै जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै काम सुरु गरिसकेको छु ।
–निगम भ्रष्टाचार गर्ने एउटा अखडाको रुपमा रहेको भन्ने गरिन्छ । यसलाई कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?
मैलै संस्थालाई बचाउन खोजेको होइन । निगममा संरचनागतरुपमै समस्या रहेको छ । यसमा ३३ प्रतिशत निगमको र ६६ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । निगममा देखिएका सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार निगमले नै लिनुपर्छ । निगममात्र नभएर सवै ठाउँमा कमजोर भनेको कर्मचारीतन्त्र रहेको हुन्छ । निगमको व्यालेन्ससिट हेर्ने हो भने प्रशासकिय खर्च, कुल खर्च, नाफा कति छ । प्रसासकीय खर्च दुई प्रतिशत रहेको छ । दुई प्रतिशत नाफा रहेको छ । कारोबारको अनुपातमा टेलिकम र निगम हेरौ कति फरक छ । दुईवटा एउटै प्रकारको संस्था हो । तर टेलिकम कति नाफामा छ । निगममा तीन प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राखेको छैनौ ।
–निगममा के कस्ता विकृतिहरु रहेका छन ?
काम गरेपछि तलब खाने हो । तलब बाहेक काम ठग्ने प्रवृत्ति त हरेक ठाउँमा रहेकै हुन्छ । कोही अलि बढी काम गर्ने र कोहीले ठग्न पाए हुने थियो भन्ने मानव स्वभाव हो । कर्मचारी कार्यलयल आउने र जाने हेर्नका लागि सयन्त्र रहेका छ । तर कसले कति घन्टा काम ग¥यो भनेर कार्यसम्पादन हेर्नका लागि त्यस्तो संयन्त्र त छैन । निगम भित्रको विकृति म आएदेखि देखेको छैन र हुन पनि दिदैन । निगमले पम्पलाई सही परिणाममा तेल वितरण गरिहेको छ । यदि कसैले निगमबाट तेल कम आएको भन्ने गुनासो आएमा त्यसको हर हिसाव उपलव्ध गराउँछु ।
–निगमलाई कसरी संरचनागत र नीतिगतरुपमा परिवर्तन गदै हुनुहुन्छ ?
सवै भन्दा ठुलो चुनौति भनेको यही हो । हाम्रो अवस्था भनेको अर्धन्यायिक निकाय हो । हामीले अनुमति (लाइसेन्स) दिइसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गछौ । हामी कम्पनी ऐनमा छौ । चाहे निजी र चाहे सार्वजनिक कम्पनी होस यी दुईमा बसेर हामीले नियमन गर्न सक्दैनौ । हामी नियमनकारी निकाय हो । निगमको नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्दैछौ । संस्थागत संरचना परिर्वतन गर्नका लागि बोर्डमा छलफल सुरु गरिसकेका छौ । हामी नियमनकारी निकाय भएकाले लाइसेन्स दिने देखि कारबाही गर्ने सम्म गछौ । मैले आउदाको पहिलो दिन देखि नै निगमको संरचनागत सुधार गर्ने कुरा सुरु गरेको छु । यस विषयमा विगतमा कुरा नै भएको थिएन । बल्ल मैलै बहसका रुपमा यसलाई अगाडि सारेको छु । संरचनागत र नीतिगत सुधार नभएसम्म निगमलाई अगाडि बढाउन सकिदैन ।
–अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य घटेपनि सोही अनुपातमा नेपालमा मुल्य नघटाएको आरोप छनि, किन मुल्य घट्न नसकेको हो ?
यो हेराईको मात्र कुरा हो । निगममा सवै कुरा पारदर्शी रहेको छ । मुल्यमा घटीबढी भएपनि रकम बस्ने भनेको निगममै हो । निगम सरकारको लगानीमा सञ्चालित रहेकाले निगम रहेको पैसा सरकारले नै लगानी गर्छ । मुल्य समायोजन गरिरहेका छौ । अहिले लगातार मुल्य बढेपनि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा सोही अनुपातमा मुल्य बढाएका छैनौ । निगम पछिल्लो तिन चार वर्ष यता नाफामा आएको हो । बैंकले तीन/तीन महिनामा व्यालेनसिट निकाल्ने गर्छन । हामीले १५/१५ दिनमा नाफा नोक्सान निकाल्ने गरेका छौ । नाफा नोक्सान सार्वजनिक गर्ने भनेको प्रक्रियाबाट हो । हाम्रो नियमले ६ महिनामा नाफानोक्सान सार्वजनिक गर्ने भनेको छ ।
–मुल्य नघटाएर निगम नाफामा जाने तर त्यसको प्रत्यक्ष उपभोक्तामा पर्ने गरेको छ नि ?
एक्कासी इन्धनको मुल्यमा लिटरमा ५० रुपैयाँ बढ्यो भने हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसको लागि मार्जिन राख्नुपर्छ । हामीले ग्राजुअल मुल्य घटाउने र बढाउने गछौ । म आएपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मुल्य बढेपछि प्रतिलिटरमा ६ रुपैयाँ मुल्य बढेको छ तर दुई रुपैयाँ मात्र मुल्य घटाएका छौ । स्वचालिन मुल्य प्रणाली अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुल्य बढ्यो भने बढाउने र घट्यो भने घटाउने प्रावधान रहेको हुन्छ । तर यो मुल्यको कम्पोनेन्टमा के के छ भनेर हामीले पुनरावलोकन गछौ ।
– निगममा विगतको भन्दा कस्तो फरक संरचना बनाउदै हुनुहुन्छ ?
आपुर्तिलाई नै सुधार गर्नुपर्छ । संस्थालाई नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्यास, पेट्रोलका धेरै बिनियमहरु रहेका छन । यी कुराहरु एकै ठाउँमा राखेर बिनियमाली सुधार गदै छौ । निगम र मन्त्रालयले पनि नै सुधार गर्न नसक्ने कुराहरु पनि धेरै रहेका छन । गुणस्तर र निगमको सम्बन्ध के हो । मन्त्रालयको लिंक भनेको बोर्ड मात्र हो । बजेट पास र कार्यान्वयन पनि पनि बोर्डले गर्छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्ती गर्दा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख आफनो जागिर बचाउनका लागि मात्र मन्त्रालय जाने हो, अरु कर्मचारीको मन्त्रालयसँग कुनै लिंक हुँदैन । इन्धनको मुल्य समायोजन बोर्डले नै गर्छ ।
– पाइपलाईन विच्छाउने काम कहिले सकिन्छ ?
पाइपलाई विच्छाउने काम हाम्रो कारणले रोकिएको छैन । बनको कारणको रोकिएको छ । तीन महिना भित्र बनले रुख व्यवस्थापन गरिसक्ने भनेर सम्बन्धित निकायबीच सम्झौता गरेका छौ । यस अघि बैशाखमा पाइपलाईन विच्छाउने सकिन्छ भनेका थियौ । अव त्यसको थप तीन महिना थपिन्छ । बनको कारणले ढिला नभए साउन महिना सम्म पाइपलाईन विच्छाउने काम सकिन्छ ।
–पाइपलाईनबाट तेल ल्याउदा मुल्यमा कति फरक आउछ ?
पाइपलाईनको लागत कति समयमा रिकभर गर्ने भन्ने हुन्छ । दुई सय करोड अनुदानमा भएपनि ७५ करोड निगमको पैसा परेको छ । पाइपलाईनबाट तेल ल्याउदा मुल्यमा स्वभाविक सस्तो पर्छ । पाइपलाईन अनुदानमा बनेकाले मन्त्रालयले ढुवानीमा चार्ज नलगाउ भने भनेपछि लगाउदैनौ र चार्ज लगाउ भने लगाउन सकिन्छ ।
– इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने प्रक्रिया के भइरहेको छ ? कहिलेसम्म भण्डारण क्षमता बनाइसक्नुहुन्छ ?
हामीले अहिलेसम्म कुनै गुरुयोजना पेस गर्न सकेका छैनौं । ९० दिनको इन्धन भण्डारण क्षमता कसरी बढाउने भनेर त्यसका लागि गुरुयोजना तयार गरिरहेका छौ । यसअघि भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने काम भए पनि अरू काम अगाडि बढ्न सकेन । इन्धन भण्डारणस्थल बनाउनका लागि जग्गा चाहिन्छ भनेर पहिलो चरणको काम त भयो, तर त्यसभन्दा बाँकीको योजनाचाहिँ हुन सकेन । यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौ । किनेको जग्गामा अख्तियारले काम गर भनेपछि गर्छौं, नगर भने गर्दैनौं । अख्तियारले नगर त भनेको छैन, त्यसका लागि कुरा भइरहेको छ । अहिले जग्गा खरिद गरेको ठाउँमा भण्डारणस्थल निर्माण नभए विकल्पमा अन्य ठाउँमा हेर्छौं । चार नम्बर प्रदेशले १ करोड रुपैयाँ भण्डारणका लागि रुपैयाँ छुट्याएको छ । देश र स्थानीयसँग मिलेर भण्डारणस्थलको काम अगाडि बढाउछौ ।
–चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउने काम कसरी गदै हुनुहुन्छ ?
हामीसँग जोडिनुपर्ने कारण पम्पमा चार्जिङ स्टेशन राख्न सकिन्छ भनेर हो । अन्य ठाउँमा बनाउन सहज छैन । भइरहेको पुर्वाधारमा कसरी बनाउने भन्ने हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र पेट्रोल पम्ममा चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउनुप¥यो भनेर आउनुपर्छ । तपाईहरुको पम्पमा हामीले प्रयोग गछौ भनेर उहाँहरु आउनुपर्छ । हामीले व्यापार बढी होस भन्ने चाहान्छौ । निगम नाफामुखी भन्दा पनि सेवा मुखी हो । विद्युतीय गाडिको प्रयोग बढाउदै जाने हो भने इन्धनको व्यापार घाटा कम गर्नुका साथै र वातावरण प्रदुषण कम गर्न सकिन्छ ।निगमको पुर्वाधार प्रयोग गरेर चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउछौ भनेर आउनुभयो भने त्यसको लागि हामी तयार छौ ।